Ngingabakha kanjani ubuhlobo isitifiketi wezokwelapha ukuba esikhundleni izincwadi zokushayela? Phendula lo mbuzo kungaba kalula futhi umane. Enough ukuba kudlule ikhomishana ezithile. Futhi ukuphela ukuthola idokhumenti kuqinisekisa impilo yezakhamuzi. It kungokwalabo amaphoyisa omgwaqo, kanye nazo zonke ezinye izibambiso ukuthola noma ukuvuselela ilayisense yokushayela. Imoto - umthombo ingozi lenyuka. Ngakho-ke kuyadingeka ukuba akwethembe ukuphathwa izimoto izakhamuzi okunempilo kuphela. Kodwa kanjani ukuze uthole isitifiketi impilo izishayeli? Zonke izici inqubo ku.
Yini okufanele ngiyenze ukuze uthole usizo
isitifiketi Medical ngokuba esikhundleni kwamalungelo - lena incwadi ebalulekile kakhulu. Njengoba sekushiwo, ngaphandle-ke ungeke zama ukuthola izincwadi zokushayela. Imane ngeke ikunikeze. Phela, iphakheji eyinhloko kwemibhalo ukubhaliswa amalungelo kufakwe isitifiketi impilo.
Yini okudingeka uyenze ukuze uthole lokhu ephepheni? Vele kudlule lapho ngihlolwa. Enough ukuba ngilidlulisele ngaphezulu Ochwepheshe ewumngcingo ukufunda idokhumenti sikhishwe yonke imithetho. Kunengqondo nzima ukuthi lutho. izakhamuzi kuphela ukuthola umbiko wezempilo isimo sezempilo kuletha ezinye izinkinga.
Kuphi ukuze uthole usizo
Umbuzo wokuqala ephakama labantu: "Ungowaphi lapho isitifiketi wezokwelapha somshayeli?" ongakhetha eziningana sokuthuthukisa izenzakalo. Futhi wonke umuntu ilungelo lokukhetha ukuthi lokho ukuya ngihlolwa.
Ngokwesibonelo, ungaya ezibhedlela zikahulumeni nasemitholampilo. kukho okuhle, kodwa ezithile ezingathandeki abalulekile. Hhayi efanelekayo kulabo abafuna ngokushesha sokulungisa izindaba ukudlula odokotela.
Indlela yesibili ukuthola - ukudlula ikhomishana ezikhethekile nezikhungo zezokwelapha yangasese. I okufana ezivamile. Njengasendabeni yabase wangaphambili nakhona nemibi. Ngokwesibonelo, izindleko inhlolovo.
Uqinisile sizoyaphi wonke umuntu ekhetha. Kodwa uhla izikhungo, ngokukhipha izitifiketi yezokwelapha lilinganiselwe. Kungenzeka ukuthi lokhu kuyinto isikhungo zomphakathi zezempilo noma isikhungo kwangasese.
Enye ezweni kwaba yindaba ekhathaza kubashayeli - kumane kubonisa ukuthi isitifiketi wezokwelapha somshayeli. Inani akuyona ngokunembile echaziwe. Konke kuncike kulokho hlobo inketho idokhumenti kuyakhethwa isakhamuzi.
Ngokwesibonelo, ungakwazi ukukhokha isikhathi sakho siqu nezinzwa. Kodwa ngokuya ezezimali ukubekezelela noma yiluphi uhlobo lokuthokoza nezindleko. i ukuqondanisa enjalo efanele emitholampilo kahulumeni. Ngo luhlolo kwabo imali musa evamile ukuthatha, kodwa ukuhlolwa zingase zephuze amasonto amaningana.
Kodwa uma indlela ekhethiwe ukwelashwa nezikhungo zezokwelapha yangasese, konke kuncike esifundeni lokuhlala uphinde amazinga eqondile inkampani ethile. Ngokwesilinganiso, ngoba lapho ngihlolwa abashayeli kungadingeka akhokhe ruble mayelana 5000. Kodwa ngeke kube yimuphi emigqeni. Bonke odokotela ngezinye izikhathi sidlule usuku olulodwa. Ngakho-ke, wonke umuntu uyazinqumela kangakanani ukuthola incwadi kadokotela ukufaka esikhundleni izincwadi zokushayela.
Odokotela emkhakheni wezokwelapha eziningi. Kodwa nawu umbuzo, lokho ochwepheshe kuzomele udlule isakhamuzi elinikwe isitifiketi yokushayela wezokwelapha we isampula entsha. Kukhona uhla ezivamile odokotela kanye nezivivinyo, okuyinto eyayiqashwe umshayeli.
Okuningi kuxhomeke isigaba lokushayela. Ukuze ulawule uhlobo oluthile ezokuthutha, asikho isidingo ukuba zihlolwe at labo noma ezinye izazi. Ngokuvamile kuziwa ukushayela izimoto ezithwala. Ngakho-ke, umuntu kufanele siqale siqonde ukuthi ongoti ziyadingeka uthole isitifiketi wezokwelapha ukuba esikhundleni izincwadi zokushayela kanye nemikhakha A no B. Ukushayela Phakathi odokotela ukukhulula:
Udokotela wezifo zengqondo;
Udokotela wezifo zengqondo.
Lolu uhlu eyisisekelo ochwepheshe. Ezinye izindaba zika-inhlolovo unikezwe indaba nje kuphela ku izincomo owelapha. Ngokwesibonelo, i-electrocardiogram. Cardiogram wakhuthaza ukuhlinzeka zonke izakhamuzi ngubani batholile eminyakeni engu-60 ubudala.
Izigaba C no-D
Kodwa ngezinye izikhathi ufuna ukuthola isitifiketi, okuyokwenza ukushayela izimoto isigaba C noma D. Kulesi simo, uhlu zonke kunesidingo odokotela inyuka siqala lake. Ikakhulukazi umehluko akubonakali izakhamuzi abaye anquma ukuba ibhekane imali ngihlolwa. Ezimweni ezinjalo, umshayeli kufanele lihlolwe ochwepheshe ezilandelayo:
the wezifo zengqondo;
kudokotela wamehlo okunethiwethi.
Ngaphezu kwalokho, impoqo unikezwe electrocardiogram. Ngu aphoyintimenti wezifo zengqondo okufanele enze uhlaziyo nokugcinwa izinto psychogenic e egazi noma omchamo. Akukho okunye okudingekayo. Kunconywa ukuya udokotela ohlinzayo olwengeziwe. Lokhu kubhekiswe kuzo zonke izinhlobo ukushayela. Ngokuvamile, owelapha esabela ukuhlolwa hhayi kuphela okuyinto ngizodabula isakhamuzi, kodwa futhi bahlola ngamanye Ochwepheshe kumadokhumenti cwaningo.
Iyini impilo incwadi kadokotela? Kuyinto umbuzo idokhumenti eziningi kanjani evumelekile engemva yayo. Into wukuthi akuwona wonke imiphumela survey iyothathwa amaphoyisa womgwaqo. Yini nemibandela ingasebenza kulesi sici?
Okwamanje, imiphumela yokuhlolwa yezokwelapha zokushayela unyaka owodwa kuphela kusukela osukwini lokukhishwa kwaso. Lokho kuyinto reference, wathola ngo-December 2015, sizophelelwa yisikhathi ngo-2016 enyangeni efanayo. Ngakho-ke, musa njalo badinga kabusha ukudlula lapho ngihlolwa lapho ilayisensi yokutjhayela esikhundleni.
isitifiketi Medical ngoba esikhundleni kwamalungelo - idokhumenti kufanele ibe njalo umshayeli. Yini edingekayo ukuze wenze ukuklama ke? Yiziphi imibhalo lokufaka isicelo yokunakekela kwezempilo ethile?
Lutho ekhethekile kusukela isakhamuzi ayidingekile. Okuningi kuxhomeke ekutheni ukufunde lavelaphi ukuba isakhamuzi - esikhungweni wezokwelapha yangasese noma somphakathi. Esimweni sokuqala, ngokuvamile kuphela kudingeka ipasipoti kamazisi yasebusosheni (yamadoda).
Uma sithola incwadi kadokotela ukufaka esikhundleni ilayisensi yokushayela Kuhlelwe emtholampilo isimo mahhala, isakhamuzi kumelwe alethe iphakethe ephelele kwemibhalo. okungukuthi:
Kamazisi yasebusosheni (yamadoda kuphela).
Yilokho. Citizen kanye imibhalo ebalwe ngenhla ubhekisela ebhukwini, kubika iphephandaba ukuthi udinga ukwenza ikhomishana ke ebhaliwe Ochwepheshe futhi uthole isiphetho sabo, owalotshwa lapho ifomu ekhethekile.
Kodwa izithombe kungukuthi ezidingekayo. kungukuthi anikezwa usizo isampula entsha. Ngakho-ke, ukuze baphathe nawe kuya isikhungo sokwelapha izithombe - akusiwona umqondo kakhulu. Kunconywa ukuba ashiye izithombe selayisense yokushayela.
Lapho kudingeka ncamashi ukufunda imibhalo? Akuzona zonke izimo, kungase kudingeke. Ngaphambili, ngisho noma wokuhlola lobuchwepheshe umshayeli kwadingeka umbiko wezempilo isimo sezempilo. Kodwa ngo-2016 ezinye izimiso ziyasebenza eRussia. Manje uhlu izimo lapho ireferensi kuya amaphoyisa omgwaqo ngempela enikeziwe, njengoba kulandela:
ekwamukelweni isigaba esithile ukushayela imoto;
e Ukukhishwa eyinhloko ilayisensi yokutjhayela;
Uma ukumiselelwa Kwenziwa kuze kokuphela idokhumenti;
sikhiphe ilayisensi entsha ukushayela emva kokuphela iphepha wathola ngaphambilini;
uma ushintsho kwedatha yomuntu siqu (isib amagama);
Uma isakhamuzi ebuyiselwa izincwadi zokushayela ngemva kokuboshwa.
Kungase kuqashelwe ukuthi ukuhlolwa lobuchwepheshe akufakiwe ohlwini olungenhla. Ingabe ngidinga isitifiketi wezokwelapha yokushayela nalelo? Cha Ngakho, njalo baphathe isitifiketi akudingekile. imithetho okusha sisebenza ERussia namuhla, abashayeli ekhuthazayo.
Yiziphi iziphetho esingasithola konke okungenhla? Usizo amaphoyisa omgwaqo - lena idokhumenti kuyadingeka ukuze ukuthola noma esikhundleni izincwadi zokushayela, kanye uma ungakwazi ukwenza izinguquko kulesi ephepheni. Thola umbiko yezokwelapha ngezindlela eziningana: ngokuxhumana Community Health Centre noma ukuvakashela ukunakekelwa kwezempilo isikhungo kwangasese.
Izikhombo izenzo ezingu-12 nje kuphela. Qaphela - uma isakhamuzi isetshenziswa usuku lokugcina ubuqiniso idokhumenti, ukuze senqabele ekuthandweni kwayo bengayi. Nakuba practice Kuthi isithombe esehlukile - amaphoyisa womgwaqo zidinga isitifiketi esisha kusukela izakhamuzi.
Izindleko yokukhiqiza idokhumenti ingeyona enkulu kakhulu. Phela, kuyinto efiselekayo ukunikeza amaphoyisa omgwaqo ikhophi yombiko yezokwelapha isimo sezempilo. Uma kungakapheli nonyaka owodwa kuyodingeka ngesizathu esisodwa noma kwenye futhi ukuletha le dokhumenti ngeke idingeke futhi ukuba kudlule lapho ngihlolwa.
Ngokuvamile, ukuze uthole incwadi kadokotela ukufaka esikhundleni ilayisensi yokushayela akuyona njengoba kunzima njengoba kubonakala. Abanye basikisela ukuthenga idokhumenti esiphelele. Ukuze wenze kanjalo ngeke kunomvuzo - kungcono emthethweni. Kungcono ukuba ahlale izinsuku ezimbalwa (kwesinye isikhathi amahora) ukuze ngokusemthethweni ukuthola imibhalo cwaningo. Ngokuvamile ukuletha imibono ekuphileni lula kunalokho kubonakala efika kuqala. By the way, akusho ukuthi zonke odokotela kwenzeke endaweni yezempilo. Abanye ochwepheshe kungenziwa wavakashela endaweni eyodwa, futhi abanye - kwenye.
Hemorrhoids Ukwelashwa amakhambi abantu
Oxosha izinambuzane: Ukwakheka, ukubuyekezwa